Ukuqeqeshwa Kwenzalo Yokushisa Okushisayo
1. Izinhloso zokuqeqesha Ngokuqeqeshwa, ukuthuthukisa imfundiso yokuzala kanye nokusebenza kwabafundi abaqeqeshiwe, ukuxazulula izinkinga ezinzima lapho kusetshenziswa imishini nokugcinwa kwemishini, ukukhuthaza ukusebenza okulinganiselwe, nokwenza ngcono isayensi nokuphepha kokudla ...Funda kabanzi »
Okusha, okunomsoco, okuphephile, lolu hlobo lokudla okusemathinini kumele kube yilokho okufunayo!
Ukudla okusemathinini kusha kakhulu Isizathu esikhulu esenza abantu abaningi bakushiye ukudla okusemathinini yingoba bacabanga ukuthi ukudla okusemathinini akukusha. Lokhu kubandlulula kusekelwe ezinkolelweni zabathengi mayelana nokudla okusemathinini, okubenza balinganise impilo yeshalofu ende nokuqina. Kodwa-ke, ukudla okusemathinini kuhlala isikhathi eside kangako ...Funda kabanzi »
Ekuboneni kwakho, ingabe kukhona iphakethe elisha elisemathinini "elikushaqisile"?
Njenge-gose yesikhathi, abantu baye balibona kancane kancane ikhwalithi yokudla okusemathinini, futhi ukufunwa kokuvuselelwa kokusetshenziswa kanye nezizukulwane ezisencane kulandele ngokulandelana. Thatha inyama yasemini ekheniwe njengesibonelo, amakhasimende awadingi ukunambitheka okuhle kuphela kepha nephakethe elikhangayo nelizimele. Thi ...Funda kabanzi »